Tonizia: Fitanisàn’ny nanatri-maso avy ao Tala · Global Voices teny Malagasy
Tonizia: Fitanisàn'ny nanatri-maso avy ao Tala
Voadika ny 11 Janoary 2011 8:39 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, Português, বাংলা, Español, Ελληνικά, English
Khayl wa Layl (Soavaly sy Alina) bilaogy Toniziana, dia namoaka taratasy iray (Ar) avy amina vehivavy iray ao Tala, manome antsipirihany mikasika ireo zava-doza natrehin'izy ireo maso tato anatin'ny andro vitsy lasa.
Olona enina no namoy aina tao Tala, tanàna any amin'ny 200km atsimo-atsinanan'i Tunis renvohitra, ary olona enina hafa naratra mafy rehefa nitifitra an'ireo mpanao fihetsiketsehana tany omaly ny polisy, hoy ny tatitry navoakan'ny vaovao.
Manoratra izy ao anatin'ny taratasiny:
Nanomboka tamin'ny 2008 ny fanoherana, saingy na teo aza ny ny fisian'izy ireny nandritra ireo taona teo aloha, tsy nisy mihitsy namaly ny fangatahanay, na dia faran'izay tsotra aza izy ireny. Ny fangatahana farany indrindra dia taorian'ny nahafatesan'i Bouazizi. Tokony hahamarika isika fa ireo fangatahana dia tamim-pilaminana na teo aza ny famoretana nitohy foana avy amin'ny mpitondra, sy ny tsy fisian'ny zo fototra, toy ny fahalalahana maneho hevitra. Ny famoretana ataon'ny òpitandro filaminana tamin'ny mpanao fihetsiketsehana no vanja nandrehitra ny afo tamin'ny farany. Io no antony nahatonga azy ireo handoro voalohany ny mariky ny fanjakana, ny Efitrano Fivoriana, ary ny marika voalohan'ny fanitsakitsahana ny momba ny tena manokana, ny paositry ny polisy.
Manohy ihany ilay taratasy:
Tamin'ny Alatsinainy lasa teo. Ny Talata tamin'ny 10 ora maraina, nanandrana handao ny sekoly ny mpianatra tamina ivon-toerana mba handray anjara amin'ny fihetsiketsehana. Voahodidina tao ry zareo saingy tafaporitsaka ihany ny mpianatra sasany, ny sisa kosa sempotry ny baomba mandatsa-dranomaso tao. Tamin'ny mitatao vovonana, afaka nandao ny toerana ihany ireo ambiny, ary dia nanomboka ny fifandonana. Tao anaty siokan'ny bala tena izy no namonjen'ny olona tao an-tanàna, ny fandriany iny alina iny, ary tao anatin'ny dradradradran-tomanin'ny renin'ireo maritiora, sy ny fiventesana ny Korany sy fanombohana ny fotoam-pisaonana no nifohazany kosa nony maraina. Ireo maritiora fantatra hatreto aloha dia ireto manaraka ireto: Ahmed Omari, 17 taona, mpianatra; Ahmed Bala'abi, 30 taona; Ayman Rutabi, 14 taona; Marwan Jamli, 19 taona; ary Ghassan Shneeti, 18 taona , mpivarotra hena, sady ny hany tokana mamelona ny fianakaviany. Nitranga tao daholo io rehetra io raha mbola seriny nijery lalao baolina kitra i Tonizia, tsy nisy nihevitra velively izay fifanatrehan'ny olona mitondra tànam-polo avy ao amin'i Tala tsy foiko sy ny mpitandro filaminana mirongo fitaovam-piadiana. Nitohy tamin'ny fanapahana herinaratra ny famoretana. Nikatona daholo ny toeram-pivarotana rehetra ary tena sarotra tokoa ny nahafahanay nàka ireo naratra ho entina ho any amin'ny hopitaly. Eny fa na dia ny amin'ireo tokony halevina aza, nanaiky ireo barbariana ireo, saingy narahany fepetra fa hoe ny vehivavy irery ihany no afaka mandevina azy ireo! Ary rehefa nitandrozotra ho any am-pasana handevina ny iray tamin'ireo maritiora ny olona, dia notafihana tamina baomba mandatsa-dranomaso, niafara tamin'ny famelàna ny vatam-paty teo amin'ny arabe. Taorian'ny andrana vitsivitsy dia vitan-dry zareo ihany ny naka ny razana, ary nandevina ilay maritiora, fa rehefa teny an-dalan-dry zareo hody, mbola voatafika indray ry zareo ary tamin'ny bala tena izy sy baomba. Loharanom-baovao avy amina hopitaly ao Tala no nanamafy ny fahafatesan'ny mpitsabo mpanampy iray nandritra ny fanafihan'ny mpitandro filaminana.
Mamarana ny taratasiny ilay ramatoa amin'ny filazàna fa:
Mitafy alahelo sy fahanginana ankehitriny i Tala. Fitoniana mialoha ny kotro-baratra ve izany? Sa hitohy hiakatra hatrany ny ranomasin-drà, ao anatin'ny tsy firaharahàna tanteraka fanaon'ny Tunis 7 (fantsom-pahitalavitra iray), izay tsy milaza ny marina!!
Soratra miverina: Ben Ali sy Tonizia (Tunisie) « GAZETY_ADALADALA
[…] iray tampo aminy, no nampiorodana ny fanjakan’ingahy Ben Ali nandritra ny 23 taona. Ary ireo famoretana nataon’ny polisy tamin’ireo mpanao […]
16 Janoary 2011, 19:16